BARNAAMIJ-SIYAASADEEDKA XISBUL Muxaafidka KULMIYE 2017-2022 ‘Horaa Loo Soconayaa’ – Q:11aad | FooreNews
Home wararka BARNAAMIJ-SIYAASADEEDKA XISBUL Muxaafidka KULMIYE 2017-2022 ‘Horaa Loo Soconayaa’ – Q:11aad
BARNAAMIJ-SIYAASADEEDKA XISBUL Muxaafidka KULMIYE 2017-2022 ‘Horaa Loo Soconayaa’ – Q:11aad
Amniga Iyo Nabadda
Qaranka Somaliland waxa gundhig u ah jiritaankiisa wadajir, midnimo, wada-tashi iyo isu-tanaasul lagu kasbaday waaya-aragnimo iyo dhaxal ka soo jeeda sooyaalka ummadda. Sidoo kale Jamhuuriyadda Somaliland waa dal lagu majeerto amni, xasillooni iyo jaar-wanaag uu kula dhaqmo waddammada deriska ah iyo caalamkaba.
Muddadii uu Xisbiga KULMIYE xilka hayey amhiyadda koowaad ayuu siiyey amniga waxaanu kordhiyey miisaaniyadda qaranka ee ku baxda amniga. Waxa uu bixiyey darajooyinka Ciidanka kala duwan ee JSL taas oo hagaajisay kala dambaynta iyo haykalka maamul ee Ciidammada amniga Qaranka JSL. Waxa uu kordhiyey mushahaarka Ciidanka JSL si loo wanaajiyo nolosha Ciidanka kala duwan ee JSL. Sidoo kale, Xisbiga KULMIYE waxa uu wada hadal ku soo af-jaray colaadihii ka aloosnaa bariga JSL. Waxa kale oo la gaadhay meelo ku dhaw xuduudaha Jamhuuriyadda Somaliland sida Taleex iyo Dharkeyn-geeyo.
Sidaa daraaddeed, muddo-xileedka labaad, waxa uu dhisi doonaa qorshe iyo siyaasad cad oo lagu hagayo amniga iyo xasilloonida dalka, iyada oo xoogga la saari doono arrimaha soo socda:
1. Waxa uu dib-u-eegis ku sammayn doonaa, si dhammaystiranna u hirgelin doonaa Siyaasadda Amniga Qaranka.
2. Waxa uu sii xoojinayaa sugidda soohdimaha dalka ee cirka, dhulka iyo badda si loo adkeeyo amniga, xasilloonida iyo degganaanshaha siyaasadeed ee qaranka.
3. Waxa uu xoogga saari doonaa xoojinta, dib-u-habaynta, tayaynta iyo casriyeynta Ciidanka Booliska qaybihiisa kala duwan, iyo dhammaan hay’adaha amniga.
4. Waxa uu samayn doonaa xeerarka Xakamaynta Tacadiyadda iyo Nidaamka Anshax marinta Ciidanka Booliska.
5. Waxa uu sii xoojin doonaa awoodda Hay’adda Sirdoonka Qaranka oo kaalin mug leh kaga jirta amniga dalka, waxaanu ka dhigi doonaa Ciidan casri ah.
6. Waxa uu sii xoojin doonaa kaalinta dadwaynuhu kaga jiro sugitaanka amniga iyo nabad gelyada dalka.
7. Waxa uu ahmiyad weyn siin doonaa ilaalinta amniga qofeed, hantiyeed iyo ka mujtamac ahaaneed si loo sugo xuquuqaha amni ee uu Dastuurku muwaadiniinta u dammaanad qaaday.
8. Waxa uu dar-dargelin doonaa go’aan daadejinta iyo tayaynta maamulka amniga ee heer gobol iyo heer degmo si jawaabta laga bixinayo falalka amni-darrada ahi ay u noqoto mid degdeg ah.
9. Waxa uu mar walba ka shaqayn-doonaa nabad-ku-wada noolaashaha beelaha Somaliland wuxuuna ka hor tegi doonaa wax kasta oo keeni kara in beelaha walaalaha ah ay xurgufi ku dhex marto waddanka dhexdiisa.
10. Waxa uu sii wadi doonaa ahmiyadda uu siiyo amniga magaalooyinka gudahooda, wuxuuna ka hortagi doonaa isla markaana jawaab adag ka bixin doonaa fal-dambiyeed kasta oo ay ku kacaan kooxaha dhaqankoodu baydhay ee caadaystay dambiyada magaalooyinka dhexdooda.
11. Waxa uu Ciidanka Asluubta Qaranku siin doonaa maxaabiista xirfado ay ku shaqaysan karaan marka muddada xabsigoodu dhammaado.
Xisbiga KULMIYE wuxuu ogsoon yahay kaalinta xooggan ee ay Cuqaashu kaga jiraan nabadda Somaliland, mar haddii ay ku suntan yihiin nidaamka xallinta khilaafaadka waafaqsan dhaqankeenna suuban. Cuqaashu waxa ay si joogto ah ula shaqeeyaan Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Ciidammada Booliska, Maxkamadaha, Guddoomiyaasha Gobollada iyo Degmooyinka. Sidaas darteed, Xisbiga KULMIYE:
1. Wuxuu kor u qaadi doonaa tayada iyo aqoonta Cuqaasha, si ay hawlahooda shaqo ee dhaqan u gudan karaan, waxaana la sugi doonaa jiritaanka asalnimada caaqil kasta.
2. Wuxuu dib u eegis ku samayn doonaa mushaharkooda oo aad uga hooseeya mushaarooyinka dalka ee lagu noolaan karo.
Xisbiga KULMIYE, isaga oo aaminsan nabad kula noolaanshaha dalalka deriska iyo kuwa caalamkaba, waxa uu xaqiijin doonaa ujeeddooyinka hoos ku xusan:
1. Waxa uu xoojin doonaa cududda amni ee Ciidanka Qaranka si looga hortago khatar kasta oo ka iman karta dalka dibaddiisa iyadoo xoogga la saarayo tayaynta iyo qalabaynta, dib-u- habaynta, dhismaha ciidammada iyo istiraatijiyadaha mustaqbalka.
2. Waxa uu kordhin doonaa mushaharka ciidammada qalabka sida.
3. Waxa uu dhisi doonaa cusbitaal casriya oo u gaar ah Ciidanka Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, si loo daryeelo caafimaadkooda.
Previous PostDhacdo Naxdinleh: Ardayda Dugsiga Agoomaha Ummul Khadiija Oo Wasiir Samsam Ku Eedeeyay Inay Xoog Uga Haysato Raashin Dalalka Carabtu Ku Soo Sadaqaysteen Next PostBuubaa iyo Marin-habaabinta Taariikhda: Xadhigii Muuse Biixi iyo Xaaladiisii- Qalinka: Cali Cabdi Coomay